I-Redmi K20 iya kuziswa ngokusesikweni ngoMeyi 28 | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwatyhilwa ukuba Isiphelo esiphakamileyo sikaRedmi sele sinalo igama. Igama elikhethwe ngumqondiso waseTshayina nguRedmi K20, kule modeli yokuqala yasungulwa ngaphakathi kwecandelo eliphezulu. Sele ziinyanga ezimbalwa sive amahemuhemu amaninzi malunga nale fowuni, eza kuba ne-Snapdragon 855 njengeprosesa ngaphakathi. Kwale datha yeempelaveki ifikile malunga nekhamera yesixhobo.
Ngoku, sele siyazi Singalindela ukuba le Redmi K20 iziswe nini ngokusemthethweni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina sele sinomhla wokubonisa eTshayina. Malunga nokusungulwa kwayo kwamazwe aphesheya akukho nto icacileyo, kwaye kukho amarhe amaninzi ngayo.
Ngekhe silinde thuba lide, kuba njengoko kusenziwa amarhe, umcimbi wokubonisa uza kubakho ngoMeyi. UMeyi 28 lusuku olukhethiweyo ukwenziwa kweRedmi K20. Izakuba kumnyhadala eBeijing apho siza kudibana khona nale fowuni yohlobo lwesiTshayina. Ibhiyozelwa ngentsimbi yesibhozo kusasa (ixesha leSpanish).
Okwangoku asazi kwanto malunga nokusungulwa kwale fowuni kwilizwe liphela. Kukho amathandabuzo amaninzi ngayo, kuba kuqikelelwa kumajelo eendaba ukuba inokumiliselwa ngaphandle kwe China njengePocophone F2, isizukulwana sesibini solunye uphawu lweXiaomi. Nangona kungekho nto iqinisekisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngokuqinisekileyo kwezi ntsuku siyahamba ukwazi ngakumbi malunga nezicwangciso ezithile zenkampani. Ngayiphi na imeko, kufuneka silinde iintsuku ezisibhozo de kube le Redmi K20 sele isemthethweni. Ke siyakwazi ukuba izokwaziswa ngaphandle kwe China phantsi kwegama lePocophone okanye hayi.
Le Redmi K20 ithembisa ukuba ngumnxeba onomdla, kukungena kohlobo kuluhlu oluphezulu. I-middle-range ye-brand ithengisa kakhulu, kunye neNqaku 7 kwi-helm. Ke sijonge phambili ekuboneni oko basilungiselele kona kuluhlu lwabo oluphezulu. Kuba inokubakho ukuthandwa kakhulu kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Redmi K20 sele inomhla wentetho